Dagaal ka dhacay Jubbada Hoose – Beegsonews-Wararka maanta
Ganacsatada Koonfurta Soomaaliya oo Xidhay Meheradahooda iyo Ciidanka laanta Socdaalka oo…
Waa maxay sababta uu Maraykan uga baxay Afghanistan? W.Q: Cabdirisaaq Rakuub
Warbaahinta, Xukunka Dhagax Ku Dilista Iyo Jarista Xubnaha Jidhka
HUBKA CASRIGA AH EE AY DALIBAAN HESHAY, ARAGTIDOODA XUQUUQDA AADANAHA IYO…
Qabsashadda Taliban ee Af-ghanistan maxaa ka dhalan kara?
Home WARARKA MAANTA Dagaal ka dhacay Jubbada Hoose
Dagaal ka dhacay Jubbada Hoose
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal u dhaxeeyay Al-shabaab iyo Ciidamada Jubbaland oo kaashanaya kuwa AMISOM,oo xalay ka dhacay deegaan katirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno katirsan Shabaab ay weerar ku qadeen Saldhig Ciidamada Jubbland iyo kuwa AMISOM, ay ku lee yihiin Deegaanka Bilis Qooqaani oo hoostaga degmada Afmadoow ee Gobolka Jubbada Hoose.
Dagaal qaatay muddo ku dhawac Nus saac ayaa ka dhacay halkaasi,waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka fudud iyo mid culus,iyadoona uu dagaalka ka soo gaaray labada dhinac khasaaro kala duwan,inkasto aan la ogeyn halka uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi.
Maamulka Deegaanka Bilis Qooqaani ayaa sheegay in iska caabiyeen weerarka uga yimid dhinaca Al-Shabaab,isla markaana ay horay uga warhayeen iney deegaanka ku soo wajahan yihiin.
Waxaa uuna hoosta ka xariiqay in Al-shabaab ay jab xooggan ku gaarsiiyeen dagaalkaasi sida uu hadalka u dhigay.
Al-shabaab dhankooda wali kama aysan hadlin dagaalka ay ku qadeen deegaanka bilis qooqaani iyo khasaaraha ka soo gaaray dhinacooda.
Dagaalkan ayaa imaanaya xili Ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM ay dhaqdhaaqyo ciidan oo ka dhan ah Xarakada Al-shabaab ay ka wadaan Deegaano iyo Degmooyin katirsan Gobollada Jubbooyinka.
Previous articleHay’adaha Samafalka oo soo saaray war Cusub
Next articleMadaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Cafis u fidiyay Maxaabiis reer Puntland ah
Ganacsatada Koonfurta Soomaaliya oo Xidhay Meheradahooda iyo Ciidanka laanta Socdaalka oo ka Hadlay
Beegsonews.com waa warbaahin madax baanaan oo ku soo baxda dalka, kaga bogo wararka Somaalida iyo aduunkaba Goorwalba iyo marwalba. oo aan kusoo qaadano wararka,caafimaadka,. NOOGU SOO GUDBI WIXII WARBIXIN AH, emailka: [email protected] iyo facebook iyo twitter beegsonews. Wa bilaahi Tawafiiq
© beegsonews Copyright©All Right Reserved Design by somwebdesign call 0634601820
Madaxweyne ku xigeenka iyo wefti uu hoggaaminayo oo socdaal shaqo u...
Ra’iisulwasaare Kheyre oo Odayaasha Galmudug kala hadlay dadajinta dhismaha maamulka Galmudug